Bhora Musango muMDC Alliance neZanu PF kuMasvingo?
Padare rekugamushira mapepa evachamirira mapato achakwikwidza musarudzo dzeparamende muMasvingo, pakaita mvonga mvonga yakanonotsa chirongwa ichi apo mamwe mapato akatadza kuwirirana kuti anoisa mapepa ndiyani.
Izvi zvakazoita kuti MDC Allaince iwanike ine vamiriri vaviri mudunhu rimwe vachakwikwidzana mushure mukupinza mapepa avo ayo akatambirwa nedare, ukuwo kuZanu PF vane chitsamwa vakaisawo mapepa avo vachikwikwidza vakazvimirira voga.
KuMDC Alliance matunhu masere akaita vamiriri vaviri vaviri vachibva kumapato akasiyana ari mumubatandizwa uyu avo vakatadza kuwirirana kuti pamire munhu mumwe chete.
Mutauriri we MDC Alliance muMasvingo, VaSimon Mupindu, vakatenda izvi asi vakati zvichagadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
KuZanu PF kwakaitawo vanopfuura vashanu vakazvimirira kusanganisira nhengo yeparamende ye Chiredzi West, VaDarlington Chiwa, avo vakati vakabirirwa pasarudzo dze bato ravo.
Asi mutungamiriri wevechidiki muZanu PF, VaPupurai Togarepi, avo vakakandawo mapepa avo kuGutu South, vakati vanhu vose vazvimirira vagara vakapandukira bato ravo nekudaro havana basa navo.
Mamwe mapato aisa mapepa anosanganisra mubatanidzwa we Peoples’Rainbow Coalition inotungamirirwa na Amai Joyce Mujuru vakakanda kumatunhu gumi nemasere pamatunhu makumi maviri nematanhu aripo muMasvingo, uye bato re MDCT rinotungamirirwa naMuzvare Thokozani Khupe.
Munyori mukuru wevechidiki veMDCT, Muzvare Isabel Mwonzora, vakati bato ravo raisa mapepa kumatunhu gumi nemana uye kumakanzuru akawanda.
Kunetsana kwakaitika mumapato makuru akaita seMDC-Alliance ne Zanu PF kwakaita kuti dare rinonoke kupedza kutora magwaro evachamiririra.